कृष्ण अविरल, (मेचीनगर-२ झापा)
चोकको चिया पसलमा बसेर ऊ समसामयिक राजनीतिका बारेमा गफ गरिरहेको थियो । केन्द्रीयस्तरका नेताहरुसँग सोझो सम्पर्क भएको पढेलेखेको इमानदार राजनीतिक कार्यकर्ता भएको कारण पनि मानिसहरु ऊसँग अनेक जिज्ञासा मेटाउन चाहन्थे । उसका निष्पक्ष कुरा सुन्न चाहन्थे । भावी चुनावको जोडघटाउका बारेमा बुझ्न चाहन्थे । का� माडौंबाट केही महिना अघि मात्रै गाउँ फर्केकोले मानिसहरु उसलाई बढी नै जानकार � ान्थे । गफमा गाउँका एकसेएक भद्रभलाद्मीहरु समेल थिए । ऊ उनीहरुको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरिरहेको थियो ।
गाँ� ी कुरा नढाँटी भन्ने हो भने पछिल्ला दिनमा राजनीतिप्रतिको उसको रुचि मर्दै गएको थियो । राजनीति गफ अनुत्पादक लाग्न थालिसकेको थियो । यद्यपि गाउँका भद्रभलाद्मीले बुझक्कड � ानेर सोधिसकेपछि उसले रुचि छैन भनेर उम्कन पनि त मिलेन ।
यस्तै बेला पानले पहेलपुर भएका दाँत ङिच्च देखाउँदै गफमा समेल हुन धर्मानन्दे आइपुग्यो । उसले त्यहाँ रहेका भद्रभलाद्मीहरु सबैलाई नमस्कार गर्यो । केही मानिसले अनिच्छपूर्वक भए पनि नमस्कार फर्काए, केहीले देखेर पनि नदेखेझैँ गरे । उसले चाहिँ मुखले मात्रै नमस्कारको जवाफ फर्कायो । अपराधिक प्रवृत्तिको मान्छे भए पनि शिष्टचारको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन भन्ने � ान्यो । परमानन्दे छेउको बेच्चमा टुसुक्क बसेर गफ सुन्न थाल्यो । यद्यपि धर्मानन्देको उपस्थिति उसका लागि पिइरहेको चियामा एक्कासी पौडिन आएको झिगोजस्तै भयो । उसलाई गफको गति अघि बढाउन मन लागेन । छोट्याउदै घरतिर हानियो गाइ बिरामी भएको बाहना बनाउँदै ।
घर पुग्नासाथ अचानक उसको मोवाइलमा पार्टीका केन्द्रीयस्तरका नेताको फोन आयो । ऊ झस्क्यो । कहिल्यै नसम्झिने पार्टीका नेताले एकाएक कसरी सम्झे उसले � म्याउन सकेन ।
निष्� ाको राजनीति गर्दै आएको ऊ पछिल्लो समयमा निकै विरक्तिएको थियो । उसको नजरमा राजनीति सेवा नभएर गतिलो ब्यवसाय भएको थियो । अवसरवादी नैतिकलम्पट चुक्लीवाज कमिशनखोर भ्रष्टहरुले गर्ने पेशा भएकोमा उसलाई दिक्क लागेको थियो ।
त्यसैले उसलाई एक मनले त लाग्यो फोन नै नउ� ाऊँ तर त्यसो गर्नु अशिष्टता हुनसक्ने � ान्यो । 'पक्कै कुनै काम लिनका लागि फोन गरेको हुनुपर्छू' उसको मनले निष्कर्ष निकाल्यो । किनकि नेताहरुले कार्यकर्ताहरुलाई सम्झन कि चुनाव आउनु पर्छ कि त ब्यक्तिगत स्वार्थको कुनै काम पर्नु पर्छ । स्वार्थ नपरी नेताहरुले कार्यकर्ताहरुलाई सम्झदैनन् भन्ने उसलाई राम्ररी थाहा थियो ।
दोधारमै उ� ायो फोन । उसले "हेल्लो" भन्नासाथ नेताज्यूले चिप्लो भाषामा भलाकुसारी सुरु गरे । आफूलाई थाहै नदिइ फर्केर गाउँ आएकोमा चित्त दुखाएजस्तो गरे । उसलाई भन्न मन थियो 'अवसर आएका बेला योग्य र इमानदार कार्यकर्ताहरुलाई कहिल्यै सम्झनु हुन्न । अवसर आएका बेला आफ्नै आसेपासे चाटुकार र नातागोताहरुलाई प्राथमिकता दिएपछि पार्टीलाई हामी जस्ताको काम रहेनछ भनेर फर्केको ।' तर उसको बोली घाँटीसम्म आएर पनि भित्रै अड्क्यो । भन्न सकेन ।
केन्द्रीयस्तरका नेता अचानक उसलाई भेट्न किन आउन लागे उसले अनेक तरहबाट � म्याउने प्रयास गर्यो । तर सकेन । एकैछिनमा नेताज्यू आइपुगेपछि थाहा भइहाल्ने कुराका लागि ऊ धेरै बेर घोत्लिन चाहेन । तर पनि उसलाई खुल्दुली लागिरह्यो । श्रीमतीले भनिन् "चुनाव आउन लाग्दैछ, तपाईको योग्यता र इमानदारीलाई हेरेर कुनै अवसर दिन लाग्या हुन् कि ? "
का� माडौँ पस्नु अघि उसले धेरैथरि सपना साँचेको थियो । पार्टीका लागि गरेको त्याग इमानदारीको सम्मान हुने अपेक्षा गरेको थियो । योग्यताको कदर हुने विश्वास लिएको थियो ।
तर ऊ का� माडौंमा तीन वर्ष पनि टिक्क सकेन । यो छोटो अवधिमा उसले नेताहरुलाई नजिकैबाट चिन्ने अवसर पायो । वास्तवमा नेताहरुको चरित्र जिल्लाबाट देखेभन्दा र आमजनताले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै भिन्न रहेछ । नेताहरुको चरित्रलाई नजिकैबाट नियालेपछि उसलाई मी� ो सपनाबाट अचानक ब्यूँझेजस्तो भयो ।
उसलाई पनि श्रीमतीको सल्लाह � ीकै लाग्यो । यतिका वर्ष समर्पित भएर भातपानी आफन्त परिवार केही नभनी त्याग गरेको पार्टीका सदस्यता किन त्याग गर्ने चूपचाप गाउँ गएर बस्दा पनि के नै बिग्रन्छ र ?
त्यसपछि उसले युवक संग� न मार्फत् पन्चायतको राजनीति सुरु गरेको थियो । केही वर्षको अथक प्रयासपछि नै ढिकुरगढी गाउँको प्रधानपन्च भएको थियो ।
त्यो भेगमा पशुचोरी कहिलेदेखि सुरु भयो किटेर भन्न सकिने अवस्था छैन । तर मानिसहरु यसको श्रेय धर्मानन्दलाई दिन्छन् । ऊ ढिकुरगढी गाउँ पन्चायतको प्रधानपन्च भएको पछिल्ला वर्षमा हरेक रात कुनै न कुनै गाउँबाट पशु चोरी भएकै हुन्थ्यो । कुनै कुनै रात त गाउँबाट दुई-तीन गो� ै रित्तिन्थे । मानिसहरुले पुलिस थानामा उजुरी हालेका थिए । एक-दुई साँझ पुलिस घुमेजस्तो गरे । त्यसपछि जस्ताको तस्तै ।
हैरान भएपछि गाउँलेहरुले समूह बनाएर गस्ती सुरु गरेका थिए । तर त्यसले पनि चोरी नियन्त्रण गर्न सकेको थिएन । यस्तो अचाक्ली हुँदा पनि पुलिस प्रशासन कानमा तेल हालेर बसेको देख्दा मानिसहरु � ूलै गिरोहको संलग्नता रहेको शंका गर्थे । तर खुलेर बोल्न सक्दैनथे ।
भनाई नै छ पाप एकदिन धुरीबाट कराउँछ । नभन्दै एकपटक ऊ लालपानीमा कट्टेल बाजेको गोरु चोर्दाचोर्दै धर्मानन्दे रङ्गेहात पक्राउ पर्यो । त्यसपछि गाउँलेहरुले उसलाई भकुर्नसम्म भकुरे । काँचो क� बाँसले कुट्दाकुट्दै उसको पिँडुलाबाट रगत आउन थालेको थियो । लुगा च्यातिएर लथा लिँग भएको थियो । शरीरभरि चोटैचोट थियो । तन्नेरीहरुको एकोहोरो मुक्का प्रहारको निशाना भएको उसको अनुहार पाउरोटीजस्तै फुलेको थियो ।
त्यसबेला सुनिएको गाईगुई अनुसार "अराष्ट्रिय तत्वहरुले प्रतिशोध स्वरुप चोरीको अभियोग लगाएर कुटपिट गरे" भनेर उसकी कान्छी श्रीमतीले अन्चलाधिशसँग विन्ती गरिछ । अन्चलाधिशको सोझो आदेशमा छुटेको रहेछ । जे भए पनि ऊ पक्राउ परेको केही महिनासम्म चौपाया चोरी � प्प भयो । मानिसहरुले शान्तिको श्वास फेर्न पाए । त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलन सुरु भयो र बहुदल आयो ।
२०५८ सालको मंसिरतिर गाउँमा फेरि सनसनी फैलियो । पुलिसले उसको घरबाट १२ बोरा गाँजा पक्राउ गरेको रहेछ । त्यो घटनापछि उसको गोप्य ब्यवसाय पनि छताछुल्ल भयो । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार उसले लामो समयदेखि गाँजा ओसारपसारको धन्दा गर्दै आएको रहेछ । ऊ गाँजा तस्करीको � ूलै नाइके भइसकेको रहेछ । यद्यपि ऊ पुलिसको हिरासतमा भने परेन । पुलिसले उसलाई खोजेर पनि भेटेन वा भेट्न चाहेन त्यो चाहिँ भन्न सकिएन । तर त्यो घटनाले उसको राजनीतिक जीवन भने संकटमा पर्यो । पार्टीले उसलाई पार्टी सदस्यतासमेत नरहने गरी बर्खास्त गर्यो ।
निगाहले हो वा विगतको त्यागको सम्मानका कारण थाहा पाउन सकिएन । तर केही महिनापछि जिल्ला विकास समितिको टिके उपसभापति भएपछि भने गाउँमा � ूलै आश्चर्य भयो । विगतमा पशुचोरीको पीडा भोगेका मानिसहरु आश्चर्यले जिब्रो टोक्न थाले । उता उसको तामझाम र सान रवाफ बेग्लै थियो । सरकारी गाडी लिएर सुरक्षादस्तासहित गाउँ घुम्न थाल्यो । जिविसका कतिपय � ेक्का पट्टा सालोका नाममा आफैंले लियो । विकासका लागि जिल्लामा आएको विकास बजेटको खुला दुरुपयोग गर्न थाल्यो । उसको हैसियत एकाएक अकासियो ।
उसले आफ्नो इच्छाविपरित धर्मानन्दलाई बोलाएर ल्याइ आफ्नो पार्टीका बरिष्� नेतासँग भेटाइदियो । संकोच मान्दै पहेलपुर दाँत देखाएर ङिच्च हास्तै उसले नेतासँग हात मिलायो । तर नेताज्यूले पहिलो भेटमै ऊसँग पहिलेदेखिको त्यागी कार्यकर्तासँगझै ब्यवहार गरे । पार्टीका बरिष्� नेताज्यूले आफ्नै सामुन्ने गोरुचोरको सर्दार धर्मानन्देसँग गरेको ब्यवहार देखेर उसलाई ग्लानि समेत भयो । लाजले भित्रभित्रै पानीपानी भयो ।
उसले भित्र हेर्यो केन्द्रीय नेता � ूलै ऐतिहासिक उपलब्धी प्राप्त भएझै मुसुमुसु हाँसिरहेका थिएँ । नेताज्यूले भित्रैबाट गर्वसाथ भने "हाम्रो पार्टीले विगतको नजिरलाई निरन्तरता दिनु पनि त पर्यो नि ।"